नेकपा विभाजनले प्रदेश सरकारमा कति जाेखिम ? « Janasahara
नेकपा विभाजनले प्रदेश सरकारमा कति जाेखिम ?
पुष १० काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपा विभाजनको हलचल प्रदेश सरकारहरूमा पनि पर्ने भएको छ । नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ मध्ये चारवटा प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्दै छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका मुख्यमन्त्री छन्, उनीहरूसँग स्पष्ट बहुमत छ ।